Ifulethi elikhanyayo nele-deco enhliziyweni ephilayo ye-Leuven
Igcwele umlingiswa nesitudiyo esesitayeleni esine-oki parquet phansi kanye nefenisha yomklami esendaweni emangalisayo enkabeni ye-Leuven.Ilula futhi inomoya, izuza ekukhanyeni okuhle kwemvelo, leli fulethi liyindawo ekahle yokuphumula ngemva kosuku olumatasa lokuhlola idolobha.Uzoba yingxenye enempilo, epholile kakhulu nejabulisayo ye-Leuven. Konakala ukuthi uzikhethele ngamabha, izindawo zokudlela, amathilomu nezitolo.Zonke izindawo zomlando, ezithakazelisayo zingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Ukupaka kwangasese kubiza u-15€/ngosuku.
Isitudiyo esihlotshiswe ngesitayela saseBrandnew esinokukhanya okuningi, esitholakala endaweni eyisizinda senhliziyo yomlando kaLeuven (umgwaqo oseceleni weHogeschool Plein).Ingaphakathi lisanda kufakwa ifenisha yokuklama, umbhede we-boxspring ophindwe kabili, i-airconditioning, igumbi lokugezela lithole ukuthintana kwakudala ngamathayili e-travertine ase-Italy kanye nekhishi elihlome ngokugcwele.
Indawo ekahle yokuphumula ngemva kosuku olumatasatasa lokuhlola idolobha nakho konke kude nezinyathelo ezimbalwa (i-bistrot, amabha, indawo yokudlela, izitolo zasebusuku).
4.77 ·179 okushiwo abanye
4.77 out of 5 stars from 179 reviews
4.77 · 179 okushiwo abanye
Indawo isendaweni eyisizinda sendawo yomlando yaseLeuven eduze kwepaki elincane (Hogeschoolplein), ezinyathelweni ezimbalwa ukusuka e-Leuven's Old Market nase-Muntstraat enendathane yezindawo zokudlela.
Le ndawo iwumsebenzi wezidleke namasiko, ibamba inqwaba yamathilomu, amabha, izindawo zokudlela nezitolo.
Ezinye izakhiwo zomlando zikumakhelwane njengeHholo Lenyuvesi, iCity Hall, iSaint-Peter's Cathedral, iPaus College, i-Atrecht College…